Aza manome alalana ny olona hafa ny hanimba ny andro. - Anony - Quote Pedia
Ny fiainana sarobidy. Ny olona izay eo amin 'ny fiainantsika dia miavaka fa amin'ny dingana ny fampivelarana ny fifandraisana, tsy tokony hanadino ny tenantsika. Tokony hifandray amin'ny zavatra ilaintsika sy ny foto-pitsipika isika amin'ny fotoana rehetra.
Tsy maintsy manana tanjona ny isan'andro eo amin'ny fiainana ary tokony hifehy izay tiantsika isika. Foana izany tsy azo atao ny maminany hoe hanao ahoana no ho avy ny lalana, fa tokony hiezaka hiaina ny fiainana eto amin 'ny teny ny fomba tsara indrindra azo atao.
Tokony hanana drafitra mazava ao an-tsaina momba ny fomba fiainantsika fa te mba hiroso amin'ny fotoana fohy sy ny fotoana maharitra. Raha toa ka rehefa mahita fiovana hiditra isika dia tokony hampifanaraka azy ireo ary hiroso. Mazava ho azy fa mora kokoa noho ny vita nefa tokony hiezaka araka izay tratry ny herintsika iatrehana ny fiainana sy ny fiovana.
Ao anatin'ny fikatsahana ny hampifanaraka sy handroso, isika rehetra dia mamolavola faribolana iray izay iankinan'ny tsirairay. Saingy mety misy fotoana izay lasa tafahoatra loatra ny olona sasany ary mety ho avy amin'ny faribolana anatiny mihitsy isika.
Noho izany, manomboka amin'ny azy ireo vahiny hafa izay noheveriny fa manana ny fahefana izy ireo hiditra an-tsehatra, dia tokony tsy toy izany ny olona rehetra. Indraindray, tena mahita fitiavana loatra ny olona iray isika ka tsy mahafehy tena intsony. Avelantsika hanjaka amintsika amin-tsitrapo izy ireo.
Izany no ilana fifehezan-tena dia ilaina ampiasaina, ary tokony ho mailo isika fa tsy hanome olon-kafa ny tanany ambony eo amin'ny fiainantsika be ka mety hanimba andro iray ho antsika. Raha haintsika ny mahavita an'io fomba fiainana io, dia afaka mifehy ny fiainantsika isika.
Fanentanana mivaingana momba ny andro
Teny momba ny olona amin'ny fiainanao
Rehefa maniry lava ny fantsika dia manapaka fantsika tsy rantsantanana. Toy izany koa rehefa lehibe ny tsy fifankahazoana, tapaho ny egoo fa tsy ny fifandraisanao. - Anonyme
Manapaka ny fonao ianao rehefa mihalehibe? Notapahana koa ve ny fanondronao? Tsy marina!
Ny fanajana dia ho an'izay mendrika azy fa tsy ho an'ireo izay mitaky azy. - Anonyme
Ny fanajana dia iray amin'ireo zavatra tsara indrindra azon'ny olona tratrarina amin'ny fiainany. Raha misy olona…
Fohy ny fiainana Aza manararaotra mampahafantatra olona iray ny momba ny fiahianao azy ireo. - Anonyme
Tsy tokony hanenina mihitsy ny olona. Tokony hanaiky ny fitahiantsika araka izay tratra isika. Isika ...
Aza matahotra raha tsy eo amin'ny toerana tianao haleha ianao. Mitaky fotoana ny zavatra lehibe. - Anonyme
Mety hanana tanjona na tanjona ianao, sahala amin'ny misy olona ambinina! Na izany aza, aza mahatsapa…
Ny finoana sy ny vavaka dia samy tsy hita, nefa mahatonga ny zavatra tsy ho vita izany. - Anonyme
Ny finoana sy ny vavaka dia samy tsy hita, nefa mahatonga ny zavatra tsy ho vita izany. - Teny nindramina tsy fantatra anarana: